सेञ्चुरी बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन खाता सेवा3Ghumti
2077 मंसिर 18 बिहीबार
सेञ्चुरी बैंकले सुरु गर्यो अनलाइन खाता सेवा
बैंक/वित्त | 2020-11-20 15:16:00 |
काठमाडौं । कोभिड–१९का कारण बैंकका सेवाग्राहिहरुलाई पर्न गएको विभिन्न बैंकिङ्ग समस्याको समाधानको निम्ति सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले डिजिटल बैंकिङ्गलाई सहज बनाएको छ । जसमा बैंकले सेञ्चुरी सहज खाता र सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्ट भन्ने दुई प्रकारको अनलाइन एकाउन्ट सेवा सुरु गरेको छ ।
ग्राहकहरुले घरमै बसेर शून्य मौज्दातमा खोलिने उक्त खाताहरुमा बैंकले वार्षिक ५.५०% को दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गर्ने छ ।
बचत खातामा उच्चतम प्रतिफलका साथ खोल्न मिल्ने उक्त खाताहरु डिजिटल्ली खुल्ने र ग्राहकहरु बैंकमा उपस्थित हुन नपर्ने हुदाँ डिजिटल बैंकिङ्गलाई प्राथमिकता दिदैं उक्त बचत खाताहरुमा प्रबर्धनको निम्ति बढि ब्याजदर दिइएको हो ।
सेञ्चुरी सहज खातामा नयाँ ग्राहकले खाता खोल्नको साथै उक्त खातामा तुरुन्तै पैसा जम्मा गरी ‘सेन्चरी पे’मार्फत वालेटको कारोबार समेत गर्न सकिनेछ ।
यस नयाँ सेवा मार्फत ग्राहकवर्गहरुले विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट प्रति दिन रु. ५,००० बराबर क्यासलेस कारोबार गर्न सक्नेछन् । उक्त खातामा वार्षिक रु. १,००,००० सम्म कारोवार गर्न सकिनेछ ।
सेञ्चुरी क्लीक एकाउन्टमा नयाँ ग्राहकले अनलाइन बाटै खाता खोल्नको साथै उक्त खातामा तुरुन्तै पैसा जम्मा गर्न सकिन्छ । उक्त खातामा वार्षिक रु. १५,००,००० सम्म कारोवार समेत गर्न सकिनेछ ।
विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई लक्षित गरि बैंकले यो खाता संचालनमा ल्याएको हो । उक्त खाताहरु खोल्दा आवश्यक भेरिफिकेसन कोड बैंकले आधिकारिक मोबाइलमा वा ईमेलमा उपलब्ध गराउने र सहजै खाता खोल्न र संचालन गर्न सकिनेछ ।
बैंकको अनलाइन एकाउन्ट सेवा https://onlineaccount.centurybank.com.np बाट लिन सकिन्छ । थप जानकारीका लागि बैंकको आधिकारीक वेबसाइट www.centurybank.com.np तथा बैंकका शाखा कार्यलयहरुमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ ।
रिलायन्स फाईनान्सद्धारा “रिलायन्स स्वाबलम्बी बचत खाता” सञ्चालन
काठमाडौं, मंसिर १८ । रिलायन्स फाईनान्सले रिलायन्स स्वाबलम्बी बचत खाता” सञ्चालनमा ल्याएको छ...
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको लाभांशः बोनस र नगद दुवै घट्यो
काठमाडौं । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि...
एनएमबी बैंक दि बैंकर्स बैंक अफ दिइयर २०२० बाट सम्मानित
काठमाडौ, मंसिर १८ । एनएमबि बैंकलाई दि फाइनान्सियल टाइम्स् लण्डनले वर्ष २०२० का लागि नेपालकै...
नेपाल भारत सिमाका भन्सार कार्यालयहरुमा प्रभुु बैंकको काउन्टर
काठमाडौ, मंसिर १८ । नेपाल भारत सिमाका भन्सार कार्यालहरुमा रहेका प्रभु बैंकको एक्स्टेन्सन...
ग्लोबल आइएमई बैंकको २३२औ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा ईलामको माईजोगमाईमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले ईलाम जिल्लाको माईजोगमाई गाउँपालिकामा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग...
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र चौरजहारी न.पा.बीच सम्झौता, सहुलियतपूर्ण कर्जा नयाँ आर्थिक मोडल बन्न सक्ने
काठमाडौ, मंसिर १७ । पूर्व गृह र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री तथा संघीय संसदका सांसद माननीय...
काठमाडौ, मंसिर १७ । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले पशुपतिनाथ मन्दिरमा वातावरणमैत्री शवदाह गृह...
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा ‘भिजा कन्ट्याकलेस कार्ड’ सेवा सुरु
महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले ‘भिजा कन्ट्याकलेस कार्ड’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको...
एनआईसी एसियाका ग्राहकले अब मोबाइल बैंकिङबाटै खाता खोल्न सक्ने
एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङमार्फत ग्राहकलाई आफैँ मुद्दति खाता खोल्न सक्ने...
भारतमा कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या करिब एक करोड
१५ अंकले घट्यो नेप्सेः दुई वटा समुहले कमाउँदा १० वटा समुहले गुमाए
२५ किलो अवैध लागूऔषध गाँजा सहित पक्राउ
काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा आमाछोरी मृत फेला फेला, श्रीमान अचेत
४ घण्टापछि सिमकोट विमानस्थलको आगो नियन्त्रणमा
सुनको भाउमा केही दिनको ओरालोपछि फेरि उकालो लाग्ने क्रम जारी
‘हल्टप्राइज एट आईओई २०२० –२१’ कार्यक्रमको फाइनल कार्यक्रम सम्पन्न हुुने
एनसेलले ल्यायो नयाँ भ्वाइस प्याकहरुः